Baaskiil xamuul koronto Shiinaha: 15G Xakamaynta, 80km masaafada, xamuulka ugu badan ee 300kg, Warshadda Taayirada Vacuum iyo soosaarayaasha | GUODA
Baaskiil xamuul koronto: 15G Controller, 80km masaafada, ugu badnaan 300kg, Taayirada Vacuum
Waxaa wata batari 60V58Ah ah iyo 10-inji 1400W, Baaskiilkeena Ace ee culus oo xamuul ah wuxuu kuu adeegi karaa safar 80-kiiloomitir ah oo ay saaranyihiin alaabooyin kor u dhaafaya 300-kiilo, oo ay ku jiraan 300-10 Vaccum taayirro shaqeynaya. Waxaan u shaqaaleynaa 15G xakameeye si aan u damaanad qaadno khibradaada fuulitaanka wanaagsan. Baaskiilada xamuulka ayaa sidoo kale lagu qalabeeyaa jejebiye hore iyo gadaal iyo saddex-rogi + gadaal. Inta lagu guda jiro safarka, wadayaashu waxay ku baran karaan xogta ku habboon iyada oo loo marayo mitirka LED-ka ee baaskiilka wakhti kasta.
Jejebi disc hore / Rear
Dib uga noqo
300-10 Taayirada Vacuum
Awoodda soo dejinta
Hore: GD-KB-B003: (Madow) Baaskiil dheelitirka carruurta, baaskiil carruur ah, Toybox, baaskiil carruur qabow
Xiga: Warshadda Shiinaha Baaskiil Baaskiil Baaskiil Wadista Baaskiil Wadista Baaskiil loogu talagalay Dhallinyarada Baaskiil Nuugis Naxdin Xoog leh Isbedbedelka Xawaaraha Mountain Bike 21-30 Xawaare
Baaskiilada xamuulka korontada, oo sidoo kale loo yaqaan Baaskiiladaha xamuulka ee korontada, waa SUV-yada adduunka baaskiilka maadaama ay yihiin nooca baaskiillada ku habboon korantada baaskiilka korantada si wanaagsan. Korontadu waxay kordhisaa xamuulka iyo noocyada kala duwan ee mootooyinka xamuulka taasoo ka caawisa qaadista culeysyo culus masaafo dheer. Gaar ahaan aagagga magaalooyinka, xamuulka korontada ayaa u oggolaanaya rookayaasha korantada inay qaadaan alaab fara badan, iyo rookayaasha xamuulka si ay u gaaraan meelo ka fog fog si dhakhso leh oo waarta.
Baaskiilada xamuulka korontada waxaa badanaa loo isticmaalaa meelo kala duwan, tusaale ahaan, gaarsiinta meelaha magaalooyinka ah, iibinta cuntada ee meelaha taraafikada ee cagaha sare, uruurinta dib u warshadaynta agagaaraha rakibaadda waaweyn iyo gaadiidka alaabada lagu keydiyo. Dadaallada farsamo waxay sii wanaajinayaan xaaladaha wadayaasha, fudeydka adag iyo dardargelinta dhaqsaha leh si loo gaaro qiime jaban iyo sahlanaan dheeri ah oo lagu sameeyo hawlgallada yar-yar, taasoo ka dhigeysa in mootooyinka xamuulka ay waxtar u leeyihiin masaafo dheer ama dhul kala duwan.
Iyo sida muuqata, mootooyinka xamuulka korontada ayaa ka qiimo jaban marka loo eego baabuurta xamuulka ee dhinacyada oo dhan. Buuq ma sameeyaan. Waxay yihiin keyd-urursi iyagoo aan lahayn af weyn oo harraad u qaba shidaalka markasta. Waxay uga jajaban yihiin wadada, gaar ahaan markaad ku xaniban tahay saxmad baabuurta. Muhiimad ahaan, waxay ka khatar yar yihiin inta badan baabuurta kale ee waddooyinka
Baaskiil Xamuul koronto
Gawaarida xamuulka korantada xamuul koronto
baaskiil xamuul ah
Baaskiil xamuul bir ah
bir xamuul koronto xamuul ah